Aoka izay ny vaovao ratsy | NewsMada
Mahafanina! Izay ny amehezana ny vesatry ny saina manoloana ireo vaovao ratsy nisesisesy tamin’iny herinandro iny. Mavesabesatra ny fiatrehana ny fiainana manoloana ireo trangan-javatra maro niseho.
Nodimandry ny filoha Zafy Albert, famonoana tamin’ny fomba feno habibiana ankizy, valanaretina pesta miteraka horohorro ary mahafaty olona betsaka, halatra sy vonoan’olona etsy sy eroa, fanafihana mitam-piadiana, dahalo manafika, fatin-jaza misy manary, mpianatra samy mpianatra mifamono, fanakatonana ny orinasa AAA, gadra nitsoaka…..
Tsy nisy zavatra tsara mihitsy henon’ny sofin’ny Malagasy na iainany. Fitaintainana, tahotra, korontana, savorovoro, fahakiviana, fahaketrahana… hatramin’ny famoizampo mihitsy aza ho an’ny sasany.
Miaina ao anatin’izany ny Malagasy rehetra na an-drenivohitra io na ambanivohitra. Mila vaovao tsara kosa amin’izay manomboka izao. Mba tian’ny sofin’ny Malagasy ho heno ny hoe: nidina ny vidim-bary, foana ny asan-jiolahy, madio ny tanàna ary tsy misy intsony ny pesta, tsy misy ny delestazy, milamina ny fitsaboana eny amin’ny tobim-pahasalamana marobe, ny asa miforona ho an’ny tanora, foana ny kolikoly, voatsimbina ny sahirana, mahazo aina ny vola malagasy, misitraka ny harem-pireneny ny vahoaka, mandry fahalemana i Madagasikara, miaina ao anaty fiarahamonina milamina ny rehetra….
Miandrandra izany vaovao tsara izany ny rehetra. Miankina amin’ny fahaizan’ny fitondram-panjakana ihany anefa no hahatanteraka izany. Eo indrindra koa ny fiovan’ny toe-tsain’ny rehetra izay efa lasa lomorina vokatry ny fanapotehana nitaizana ny vahoaka tao anaty gaboraraka nandritra ny fitondrana Tetezamita.
Fahombiazan’ny mpitondra ny filaminan’ny vahoaka ao aminy. Anjaran’ny rehetra ny mitsara na mahomby ny mpitondra na tsia amin’ny alalan’ny zavatra iainany ankehitriny.